Nalain’ny olona teny ampelatanan’ny zandary… Matin’ny fitsaram-bahoaka ilay namono ny sakaizany | NewsMada
Nalain’ny olona teny ampelatanan’ny zandary… Matin’ny fitsaram-bahoaka ilay namono ny sakaizany
Maty tsy tra-drano notsatohan’ity tovolahy iray antsy ny sakaizany, tany Sambava, ny andron’ny 26 jona teo. Maty niharan’ny valifaty sy fitsaram-bahoaka avy eo ilay tovolahy, na efa teny am-pelatanan’ny zandary aza.
Maty tsy tra-drano tamin’izany ilay tovovavy novonoin’ny sakaizany. Voalaza fa vokatry ny hasarotam-piaro ny nahatonga ny fihetsika tsy am-piheverana nataon’ilay tovolahy io. Voasambotry ny zandary io alina io ihany ity farany. Ny ampitso anefa, raha nitondra ilay tovolahy io ny zandary, narahin’ny fokonolona avy ao aoriana. Nalain’ny olona teny ampelatanan’ny zandary ilay tovolahy nahafaty ny sakaizany ary nentin’ireo niverina tany an-tanàna. Niharan’ny fitsaram-bahoaka izy io noho izany, ary tsy namelan’ny olona raha tsy niala ny ainy. Tsy nisy azon’ny zandary natao tamin’izany. Voalaza fa samy andrasana any amin’ny tsangambato any Anketrakabe ny fatin’izy io sy ilay tovovavy sakaizany.
Tranga mitovitovy amin’izay ihany, resaka fitakiana fitsaram-bahoaka. Vokatry ny fahafatesana tovolahy iray 21 taona noho ny tsindrona tavoahangy, tany Sambava ihany ny alin’ny 27 jona, nirohotra teny amin’ny tobin’ny zandary ny andiana tanora nitaky ny hamoahana ilay nahavanon-doza. Voasambotry ny zandary izy io mantsy ary notanana. Niezaka ny zandary niaro ny toby ary nanazava tamin’ireo andiana tanora ny fandikan-dalàna mety hataony raha misisika hanao fitsaram-bahoaka, sns. Nilamina ihany ny toe-draharaha.
Olana hatrany fitsaram-bahoaka
Hatramin’izao, tsy mbola nahitam-bahaolana ny resaka fitsaram-bahoaka. Tsy voatana ny olona rehefa hanao azy io. Miafara amin’ny faty olona sy faharatrana izany rehefa tsy voafehy. Tsy nisy ny paik’ady mahomby hatreto hisorohana azy io. Ny taona 2009 noho makaty ny tena nampirongatra azy io. Mifangaro amin’ny resaka krizy sy ny tsy fahatokisan’ny olona ny mpitondra rahateo ny raharaha. Milaza ny lehiben’ny mpitandro filaminana fa hanao ny fomba rehetra hisorohana izany kanefa tsy hita mivaingana ny vokany fa mitranga hatrany. Tsy laharam-pahamehan’ny fitondrana rahateo ny misoroka azy ity ka samy manao izay saim-pantany ny rehetra. Mety ny mpitondra no hiharan’ny fitsaram-bahoaka vao hisy fepetra matotra raisin’izy ireo.